Verona Arena Waxay Ka Murugootay Khasaaraha Master Ezio Bosso
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Verona Arena Waxay Ka Murugootay Khasaaraha Master Ezio Bosso
Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ustaad Ezio Bosso
Geeridii naxdinta lahayd iyo dhicis ee Ustaad Ezio Bosso ayaa ka nixisay adduunka, iyo dhammaantiis Aasaaska Verona Arena ayaa warka ku helay murugo iyo xanuun aad u weyn.
Agaasimaha Guud iyo Agaasimaha Farshaxanka, Cecilia Gasdia, oo saaxiib weyn la ah Maestro, ayaa soo xusuustay: “always Marwalba waan idinla joogi doonaa iyada oo ereyadan ay ka buuxaan xoog iyo saaxiibtinimo. Ezio wuxuu igu salaamay wicitaankii fiidiyow ee ugu dambeeyay laba maalmood kahor.
“Waan ogahay, Ezio, waad i sii sheegi jirtay markasta… sidaad markasta ii sheegi jirtay inaad rabto inaad u guurto Verona, magaalada aad jeclayd ee ay inbadan oo naga mid ahi ku jecel yihiin. Adiga, nafta quruxda badan, ee nagu afduubtay caqligaaga, macaankaaga, macaankaaga, daacadnimadaada, geesinimadaada… aan xad lahayn.
"Saaxiibkay, waxaad igaga tagaysaa badweynta xanuunka laakiin waad ila joogtaa… dhinacayga."
Magaalada oo dhan ayaa laga barooranayaa maqnaanshaha Master Ezio Bosso. Verona, xaqiiqdii, aad bay u jeclayd isaguna bishii Ogosto 11, wuxuu ugu dabaaldegay kulankiisii ​​ugu horreeyay Arena oo leh fiidnimo xusuus mudan oo loogu talagalay Carmina Burana.
Maestro Bosso, munaasabaddiisii ​​ugu horreysay ee Arena, wuxuu yiri: “Waa masraxa riyada dadka jecel muusikada iyo kuwa jecel. Aadida Arena waa tilmaam shucuur ka buuxo, taas oo ka dhigaysa taariikhda qofka meesha joogay oo kaliya ma aadi doonto riwaayad haddii aad ka fikirto.
Xitaa masuuliyad dheeraad ah oo iga saaran aniga, xitaa haddii aan had iyo jeer dhigo wax walba oo aan qabanayo. Dad badan oo reer Veronese ahna way ogyihiin maxaa yeelay waxaan ku iri si aan shaki ku jirin riwaayaddeydii hore, waa riyada hooyaday (iyo sidoo kale aabahay). Sababtoo ah Verona waxay ilaalisay sanadihii dagaalka. Waxa aan iri waxay ahayd - haddii aysan Verona jirin, anigu ma aanan dhalan.
“Arena waxay ahayd hadiyaddii ugu horreysay ee aan walaashey si wadajir ah ugu siin karo waalidkeen: in laga dhigo in ay dib ugu laabato Arena oo aysan awoodin in ay tagto sannadahaas. Tanna waxaan u maleynayaa inay dhaheyso dhammaanteed, gaar ahaan mahadnaq in ay jiri doonto tilmaam kasta oo agaasime ah - oo kaliya maahan - oo aad arki doonto maalmahaas.
“Marka, mar labaad waad mahadsan tahay, Verona, waana ku mahadsan tahay Mrs. Gasdia, waxaanan u mahadcelinayaa Arena. Maxaa yeelay Verona waa Arena, Arena-na waa Verona. Waa run, markay muusikiisteyaasha is wada yeeshaan, waxay fuliyaan hamiga aan waqtiga lahayn. ”
Kadib wax yar ka hor intaan la salaamin dadka ku soo xoomay fagaaraha Arena, wuxuu ahaa Master Ezio Bosso laftiisa oo ku dhawaaqay inuu ku soo laabanayo masraxa Arenian isagoo hogaaminaya IX Symphony of Beethoven, dhacdaduna runtii waxay ahayd mid ka mid ah dhacdooyinkii sida weyn loo sugayay. dadweynaha.
Xusuusta lama illaawaanka ah waxay ku sii jiri doontaa dhammaan kuwii isaga garanayay, oo ah farshaxan sirdoon aan caadi ahayn iyo hufnaan iyo nin dadnimo qoto dheer leh.
Master Bosso waxaa lagu sameeyay qalliin dhanka maskaxda ah si looga saaro kansarka sanadkii 2011 sidoo kale waxaa laga helay cudurka neurodegenaritive, oo ah cillad autoimmune syndrome. Wuu sii waday inuu ciyaaro, ka dib bishii Sebtember ee 2019 cudurka wuu ka sii daray oo wuxuu waxyeeleeyay isticmaalka gacmihiisa. Wuxuu igu yiri, "Ma ciyaari karo mar dambe, jooji i weydiinta." Bosso wuxuu jiray 48 sano markii uu dhaafayay.
Midawga Yurub: Xeerarka cusub ee soo galitaanka Hong Kong waxay halis gelinayaan ...